Qoor-Qoor oo Xaaf ka reebay tartanka Aqalka Sare | KEYDMEDIA ENGLISH
Xaaf ayaa horey u sheegay in Qoor-Qoor uu rabo inuu ka reebo tartanka doorashadda Aqalka Sare, islamarkaana uu wali ku wado dagaalkii uu ku billaabey markii uu Madaxweynaha ahaa.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Madaxweyne Qoor-Qoor, ayaa soo saarey liiska Musharixiinta labada Kursi ee ka harsanaa kuraasta Aqalka Sare ee laga doorto Galmudug.
Musharixiinta wuxuu Qoor-Qoof safka hore ku qoray Cabdi Qeybdiid, oo la tartamayo Musharax malxiis ah, kaasoo la geliyay booskii Xaaf, oo dad badan sugayeen inuu la tartami doono.
1. Cabdi Xasan Cawaale (Qaybdiid)
Mahad Aadan Guuleed
Waxaa sidoo kale uu Qoor-Qoor ka reebay tartanka C/waaxid Cilmi Qoonjeex oo horey kursiga ugu fadhiyay, waxaana labada Kursi doorashadooda soo afjaraysaa geedigii dheeraa ee Aqalka Sare kuraastiisa 54 lagu soo xulayay.
Maalmaha soo aadan ayaa la filayaa inay Galmudug qabato doorashadda Kuraasta dhiman, iyadoo loo gudbayo doorashada Aqalka Hoose, oo hadda uu RW Rooble sheegay in lasoo afjarayo kahor inta aan dhamaan sanadkan.
Doorashadda Baarlamaanka Soomaaliya waxay noqotay mida ugu dheer, iyadoo socotay mudo 6 bilood ku dhaw. Sababtuna waa khilaafkaa siyaasadeed ee uu Farmaajo dalka geliyay.